ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): 10-day Vipassan Meditation Course
ဆရာကြီးဦးဘခင်၏ နည်းစံနစ်အတိုင်း ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာ သင်ကြားပို့ချပေးသည့် ၀ိပဿနာ ကမ္မဌာန်းတရားစခန်းကို စင်္ကာပူနိုင်ငံ St.John Island တွင် ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့မှ မတ်လ (၂) ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ကျင်းပပါမည်။ ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာ၏ မြန်မာလက်ထောက်ဆရာများကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားပေးပါမည်။ တရားပတ်ဝင်လိုပါက Vipasanna Singapore Website မှတဆင့် အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာတင်နိုင်ပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက အောက်ပါယောဂီများထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ၀ိပဿနာရိပ်သာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဤနေရာမှ ဒေါင်းလော့ခ်ဆွဲယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ အာရှတိုက်တွင်းရှိ အခြားနိုင်ငံများတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပမည့် တရားစခန်းနေ့ရက်များကို ဒီလင့်ခ်မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
10-day Vipassan meditation course as taught by Mr S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khin will be held at St. John Island from 20 February to2March 2008. The course will be conducted by Burmese Assistant Teachers of Mr S.N. Goenka. Those who wish to attend may apply on-line from the Vipassana Singapore website. For enquiries please call the following contact persons.
Vipassana International Centre (Singapore)
10 Ubi Crescent #04-70
Phone:  9011 9432
San Sanda Aung  9365 0954
Kay Zin Wint  9186 7355
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:18 PM